AKHRISO:- Ra’iisul wasaare Kheyre iyo Keating oo ka hadlay arimo ku saabsan Soomaaliya – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaAKHRISO:- Ra’iisul wasaare Kheyre iyo Keating oo ka hadlay arimo ku saabsan Soomaaliya
AKHRISO:- Ra’iisul wasaare Kheyre iyo Keating oo ka hadlay arimo ku saabsan Soomaaliya
29/03/2018 Wararka Soomaalia 0
Hiiraan Xog, Mar 29, 2018:- Wakiilka Qaramada Midoobey u qaabilsan dalka Soomaaliya Micheal Keating ayaa kulan la qaatay Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre.
Kulankaan ayaa looga hadlay Xaaladda Ammaan , Siyaasadda iyo Xaaladda Kacsan ee ka jirta Baarlamaanka Soomaaliya.
Mechael Keating ayaa sheegay in kulanka uu la qaatay Ra’iisul wasaare Kheyre uu kala hadlay xaaladda amaan,siyaasadeed,dhaqaale iyo Istiraatijiyadeed ee dalka ka socda gobolada dalka Soomaaliya.
Waxaa uu sidoo kale sheegay in ay isla garteen in lasii xoojiyo Wada shaqeynta ka dhaxeysa Hay’adda kala duwan ee dowladda Soomaaliya.
Wakiilka Qaramada Midoobey ayaa horay loogu eedeeyay in uu Soomaaliya ka gudbiyo Warbixino aan sax aheyn sidda uu horay u sheegay danjiraha Soomaaliya ee Qaramada Midoobey.
Kulankaan ayaa kusoo beegmaya xilli uu sii xoogeystay Khilaafka ka dhex taagan Baarlamaanka Soomaaliyeed ee ku aadan Mooshinka laga keenay Guddoomiye Jawaari.
AKHRISO:- Xildhibaano sheegay in uu burburay Mooshinkii Gudoomiye Jawaari
Somaliland oo ka jawaabtay dacwadii dowlada Faderaalka Soomaaliya